राजपा नेपालले मधेश सरकार गठनबारे गर्यो यस्तो निर्णय, फोरम नेपालले के गर्ला ?
राजपा नेपालले मधेश सरकार गठनबारे गर्यो यस्तो निर्णय, फोरम नेपालले के गर्ला ?
साझा अनलाईन २०७४ पौष १३ गते मा प्रकाशित 218 पटक पढिएको
काठमाडौँ । प्रदेश दुईमा मधेशवादी दलले बहुमत ल्याएको छ । दुई दलले नै मधेश सरकार बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
बुधबार राजपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा यस विषयमा निकै छलफल भयो । ‘दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम नेपालले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । राजपा नेपालको सहयोग आवश्यक छ । संयुक्त सरकार भएकाले सरकार नेतृत्वको दावी छाड्न हुँदैन,’ बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको छैन । यस अवस्थामा राजपा नेपालले मात्र किन हतार गरेर फोरम नेपालको नेतृत्वमा नै दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बन्छ भन्ने घोषणा गर्ने भनि निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागि एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
‘फोरम नेपालले बढी सीट ल्याएको छ । उसले दावी गर्नु स्वभाविक हो । तर, संयुक्त सरकार निर्माण हुने भएकाले दावी छाड्न नहुने भन्दै दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम नेपाल र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार बन्ने मात्र निर्णय गरेको छ,’ ती नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
यस विषयमा जान्नका लागि हामीले राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई सम्पर्क गरेका थियौं । उनले भने, ‘मधेशमा मधेशी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसमा हामीले सहमति गरेका छौँ तर कसको नेतृत्वमा बन्छ त्यसको टुगों लगाएका छैनौँ ।’
जसले बढी सीट ल्याएको छ, त्यसले दावी गर्नु स्वभाविक भएको तर संयुक्त सरकार बन्ने भएकाले त्यसमा छलफल हुने उनले बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनरेश राय यादवको भनाई पनि त्यस्तै रहेको छ । उनले पनि सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ, त्यसको कुनै निर्णय भएको नभएको बताए । ‘यसमा कसैले दावी पनि गरेको छैन । दुई दल बसेर यसको टुगों लगाउँछौ,’ उनले भने ।
बैठकमा सहभागि अर्का उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरीको धारणा पनि त्यस्तै रहेको छ । उनले पनि भने, ‘फोरम नेपालले बढी सीट ल्याएको कारण उसैले सरकार बनाउन पाउनुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । तर, पार्टीले यसको बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।’
राजपा नेपालको यस्तो धारणा आइसकेपछि फोरम नेपालले पनि आफ्नो धारणा बनाउनका लागि आज पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ । तीनकुनेस्थित पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको पदाधिकारीको बैठकमा दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने विषय मुख्य विषय हुने बताइएको छ ।